यौनधन्दामा अझै सुध्रिएको छैन इटहरी - Aadil Times
26 Jan 2022१२ माघ २०७८, बुधबार
सबैभन्दा धेरै जनसंख्या काठमाडौं र कम मनाङमा दुर्घटनामा घाइते भएका पत्रकारलाई प्रेस युनियन सुनसरीले दियो ७० हजार जनकपुरमा मतदानस्थल नजिक झडप, प्रहरीद्वारा अश्रुग्यास प्रहार नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख, वृद्धिदर घट्यो सीटीईभीटीका सम्पूर्ण परीक्षा स्थगित कोसी अस्पतालमा १२२ स्वास्थ्यकर्मी कोरोना संक्रमित
यौनधन्दामा अझै सुध्रिएको छैन इटहरी
५ पुष २०७८, सोमबार १७:११ | Salauoldin Ansari
प्रदेश १ कै केन्द्रविन्दु इटहरी आफैमा चर्चित सहर हो । चौरास्त सहर भएकै कारण विकासका हिसाबले पनि यो सहर अग्रस्थानमै छ । व्यापारिक ‘हब’ को रूपमा विकसित हुँदै आएको इटहरी पछिल्लो समय फेरि केही होटल व्यवसायीहरूको विकृति धन्दाले बदनाम बन्ला कि भन्ने चिन्ता सुरु भएको छ । छिट्टै पैसा कमाउने लोभमा अहिले पनि यौनधन्दा हुँदै आएको केही घटनाले प्रमाणित गरिदिएको छ ।
अहिले पनि ‘कलगर्ल’ को कारण पुनः बदनाम हुन थालेको पाइन्छ । पहिला क्याविनमा बस्ने यौनकर्मी महिलाहरू अहिले कलगर्लको रूपमा इटहरीका होटलहरूमा भेटिन थालेका छन् । होटलमा यौनधन्दा गराएको भन्दै इटहरीमा भर्खरै दुई जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । होटलमा युवती राखेर यौनधन्दा गराउनेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेसँगै इटहरीमा यौनधन्दा अझै लुकिछिपी हुँदैछ भन्ने प्रमाणित भएको छ ।
केही वर्षअगाडि डिएसपी विनोद शर्माले यौन कार्यमा युवतीहरूलाई बाध्यकारी बनाउने होटल सञ्चालक, यौनधन्दामा संलग्न युवतीहरूलाई मुद्दा चलाएपछि केही हदसम्म रोकिएको यौनधन्दा फेरि विस्तारै बढ्न थालेको छ । दलालहरूले युवतीहरूलाई ग्राहक हेरी हेरी मूल्य राखेर यौनकार्यका लागि युवतीको शरीर मोलमोलाइमा बिक्री गरिरहेका छन् । जसका कारण इटहरी सहरको बदनाम भइरहेको छ । चौरास्त सहर इटहरीलाई यौनधन्दामुक्त गराउनसके मात्र इटहरी देशभर चम्किने पक्का छ ।
होटलहरूको सम्पर्कमा बस्ने युवतीहरू प्रायः इटहरीबाहिरका रहेको प्रहरीले बताउने गरेको छ । कोठा भाडामा लिएर बस्ने युवतीहरूलाई होटलवालाहरूले ग्राहकसँग पठाउने गरेका छन् । युवतीको शरीर मोलमोलाइ गरी बिक्री गर्नेलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुको विकल्प छैन । उनीहरूलाई सार्वजनिक मुद्दामात्र लगाएर सधैँ छोडिरहने हो भने उनीहरू पुनः त्यही अवैध व्यवसायमा आएर समग्र इटहरीको बदनाम गर्ने पक्का छ । त्यसैले यस्ता धन्दा चलाउनेहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नु पनि आज फेरि आवश्यक भएको छ ।
छोटो समयमा धेरै पैसा कमाउन पल्केका यौनधन्दा चलाउनेहरूलाई सामाजिक बहिष्कार किन नगर्ने ? बजारमा भइरहेको यौनधन्दा रोक्न व्यवसायीहरूले पनि उत्तिकै भूमिका निभाउनु पर्ने देखिन्छ । इटहरीको पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न इटहरी क्षेत्रमा भइरहेको यौनधन्दाको अन्त्य हुनु जरुरी छ । राम्रा व्यवसायीलाई राम्रो र नराम्रोलाई नराम्रो भन्ने हैसियत व्यवसायी सङ्घमा बस्ने नेतृत्वले लिँदै यस्ता अवैध काम गर्नेहरूलाई व्यवसायी सङ्घबाटै बहिष्कारसम्मको अभियान चलाउन लाग्नु आजको आवश्यकता हो ।
अवैध धन्दा गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने र राम्रो गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने अभियानमा प्रहरी लाग्नु पर्छ । होटललाई सिस्टममा लैजाने अभियान चलाउनु प्रहरीको दायित्व हो । अहिले इटहरीको पश्चिम लाइन आसपासमा साँझ पर्ने बित्तिकै तेस्रो लिङ्गीहरूले खुलेआम यौनधन्दा चलाइरहेका छन् ।
सडक आसपासमा मेकअप गरेर सडकको आसपासमा नक्कल गर्दै हिँड्ने यौनकर्मीहरूले इटहरीको सुन्दरतालाई अहिले पनि गिज्याइरहेका छन् । यसरी तेस्रो लिङ्गीहरूको यौनधन्दाको बिगबिगीले इटहरीलाई बदनाम गरिरहेको छ । तर, यो विषयमा इटहरीका अगुवाहरू समेत मौन रहँदै आएका छन् ।
सडक आसपासमा यौनकर्मी तेस्रो लिङ्गीहरूले खुलेआम यौनधन्दा चलाइरहँदा पनि किन देख्दैन प्रहरीले । सडककै छेउमा बसेर सडकमा हिँड्ने युवाहरूलाई यौनकर्मीहरूले यौनको प्रस्ताव गर्ने गरेका छन् । तर, यसरी सडकमा खुलेआम यौनधन्दा चलाउने तेस्रो लिङ्गीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गर्नसकेको छैन ।
ट्रकदेखि सडकको आसपास नै हुने खुलेआम यौनधन्दा कसले रोक्ला सरकार ? यो धन्दालाई रोक्न प्रहरीले मात्र पनि सक्ने अवस्था छैन । यसलाई रोक्न स्थानीय अगुवा नागरिक समाज र राजनीतिक दलहरूले पनि भूमिका खेल्नु पर्ला कि ?
नेपालमा यौन व्यापार वर्जित छ । तर, सबै प्रमुख सहरमा ‘सेक्स’ को किनबेच चलिरहेको छ । आठ वर्षअघि इटहरीको बसपार्कछेउमा रेष्टुरेन्टका नाममा ढुक्कले यौनधन्दा हुन्थ्यो तर, त्यो चाहिँ अहिले छैन । पहिलाका प्रहरीलाई अलिअलि दामपानी चढाएर खुसी पारेर हुने यौनधन्दा भने अहिले रोकिएको छ ।
पहिला विशेषगरी भारतीयहरू धेरै आउँथे र रमाउँथे । तर, बजारमा अहिले त्यस्तो धन्दा नभए पनि लुकिछिपी यौनधन्दा भने रोकिएको छैन । कलगर्लको प्रयोग इटहरीमा पनि बढ्दो छ भन्दा फरक पर्दैन । त्यसैले प्रहरीले छापा मार्ने मुख्य साना होटलहरू मात्र छन् । सानालाई मात्र कहिलेकाहीँ तर्साएर देहव्यापार रोक्न सकिएलाजस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन ।
सुनाकोठीस्थित बालकुमारी मन्दिरको मूर्ति चोरी
आजदेखि सार्वजनिक स्थानमा जाँदा खोपकार्ड अनिवार्य
बर्जु महोत्सव तोडफोड तथा आगजनी प्रकरणः विराटनगरमै बसेका खेसारीलालले भने–मेरो गल्ती छैन, सवै आयोजकले जिम्मा लिनुपर्छ
नेपाली नर्स बेलायत पठाउन श्रम सम्झौता गर्दै सरकार
सबैभन्दा धेरै जनसंख्या काठमाडौं र कम मनाङमा
दुर्घटनामा घाइते भएका पत्रकारलाई प्रेस युनियन सुनसरीले दियो ७० हजार
जनकपुरमा मतदानस्थल नजिक झडप, प्रहरीद्वारा अश्रुग्यास प्रहार
कोसी अस्पतालमा १२२ स्वास्थ्यकर्मी कोरोना संक्रमित